दिवङ्गत पितृले मोक्ष पाउने विश्वासमा छरियो शतबीज (फोटोफिचर) | Ratopati
दिवङ्गत पितृले मोक्ष पाउने विश्वासमा छरियो शतबीज (फोटोफिचर)
काठमाडौँ — मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीका दिन आज बिहानै हिजोदेखि देशभरका शिवालयमा रातभर महादीप बाली बसेका भक्तजनले नदीमा स्नान गरी शतबीज छरेका छन् ।
यस वर्ष बाला चतुर्दशीको मेला भर्न पशुपति क्षेत्रमा आएका भक्तजनलाई चिसो नहोस् भनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्रिपालको व्यवस्था गरेको सदस्य–सचिव डा प्रदीप ढकालले बताए ।
त्यस्तै, पशुपतिनाथमा आएका भक्तजनहरुले सौचालय नहुँदा समस्या खेप्नु परेको छ । बालाचतुर्दसिमा आएका भक्तजनहरुलाई सौचालयको मुख्य समस्याका कारण सास्ती ब्यहोर्नुपरेको छ ।
कुलेस्वर निवासी सबिन भट्टराईले भने —यो दिनमा पसुपतिमा यतिधेरै मान्छेहरू आउँछन् भन्ने जानेका बिकास कोसले अस्थायी सौचालयको ब्यब्स्था गर्नुपर्दथ्र्यों । त्यस्तै, पशुपतिनाथमा आएका केहि बृद्धबृद्धाले त लाईन बसैकै भिडमा पनि सौचालयको समस्याका कारण पिसाव फरेको देखिएको थियो ।
केहि भक्तजनले राजधानीको पशुपतिनाथभित्रै पनि एउटा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था राम्ररी गर्न नसक्ने भनि आलोचना समेत गरे । हिन्दु धर्मको लागि चाहि वास्तै नगर्ने तर, विदेशी धर्मको लागि भने त्यत्रो तामझाम गर्ने भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरेका थिए ।
प्रदेश ५ मा राष्ट्रियसभा सदस्य लागि मतदान शुरु : मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा मतदान
सातै प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मतदान सुरु, कहाँ कहाँ हुँदैछ मतदान ?
प्रदेश दुईमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सुरु, मुख्यमन्त्री राउतले गरे मतदान
बैंकका ६५ हजार कर्मचारीलाई प्रश्न सोधिँदै : सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने कि नजाने ?
के साउदी युवराजले गराए संसारकै धनाढ्य जेफ बेजोसको फोन ह्याकिङ ?